Maxaa ka soo baxay kulankii Garowe ku dhex maray Dani iyo Swan? – Hornafrik Media Network
Maxaa ka soo baxay kulankii Garowe ku dhex maray Dani iyo Swan?
Wafdi uu hoggaaminayo ergeyga Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Swan oo booqasho ku tegay magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland ayaa halkaas kula kulmay Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni.
Swan ayaa waxaa wafdigiisa ku wehliyay xubno ka kala socday Midawga Yurub, Midawga Africa iyo urur goboleedka IGAD.
Intii uu socdey Kulankaas ayaa waxaa looga hadlay arimaha doorashooyinka dalka ee sanadka 2020/21, amniga, dayn cafinta Soomaaliya, dhamaystirka dastuurka qabyada ah ee dalka iyo khilaafka ragaadiyey wadashaqeyntii looga baahnaa inay dhex marto dowladda dhexe iyo qaar ka mid ah maamul-gaboleedyada xubnaha ka ah oo ay ugu horeyso Puntland.
Ergeyga gaarka ah ee Qaramada Midoobey James Swan ayaa booqashada uu maanta ku tegay magaalada Garowe waxay qeyb ka ahayd safarro uu maalmahaan ku tagayey xarumaha qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka, kuwaas oo qaar kood khilaaf kala dhaxeyo dowladda federaalka, sida Jubbaland oo uu shalay la kulmay madaxweynaha ka arrimiya Axmed Madoobe.
Sidoo kale waxa uu horay u tagay magaalooyinka Jowhar iyo Baydhabo ee maamulada Hir-Shabeelle iyo Koonfur Galbeed, isagoo madaxda maamuladaas kala hadlay arrimo ay ugu mug weyneed doorashooyinka lagu wado inay dalka ka dhacaan sanada 2020/2021-ka.
Wasiir Khadiija Diiriye oo shaacisay xilliga la furayo Stadium Muqdisho iyo cayaaro ka dhici doona